Akụkọ - 2022 Ka Ọhụrụ LH-BM3000L 4 Layers Water Tank Blow Molding Machine's Mbupu
2022 Ụdị Ọhụrụ LH-BM3000L 4 Layers Water Tank Blow Molding Machine's Mbupu
Usoro mmepụta: Usoro mmepụta nke Luhong akpaka oghere ịfụ ịkpụzi igwe na-anabata usoro ịkpụzi extrusion ịkpụzi.
Uru ngwaahịa: njikwa hydraulic servo, nchekwa ike na arụmọrụ dị elu.Ihe ndị a na-ejikarị eme ihe: onye na-ebelata nha nha eze siri ike + inverter ebubatasnwere ike ịmepụta ngwaahịa: IBC, gbọmgbọm mgbanaka abụọ, otu mgbanaka barrel, tray, wdg.
Ọrụ ngwaahịa:Luhongakpaka oghere igbu ịkpụzi igwe bụ ọhụrụ ọgbọ akpaka ịfụ ịkpụzi igwe pụrụ iche mepụtara dị iche iche na ngwaahịa.Akụrụngwa na-anabata njikwa hydraulic servo, nke na-echekwa ike na ịrụ ọrụ nke ọma.Bọket ndị ahụ dị mma.
Usoro mmepụta:Luhongakpaka oghere igbu ịkpụzi igwe adopts nchekwa anwụ isi, ọhụrụ na-agba ọsọ imewe, ngwa ngwa agba mgbanwe, na multi-layer anwụ isi nwere ike mere dị ka ndị ahịa chọrọ.Akụrụngwa na-eji usoro ntụgharị anwụ anwụ na-aga azụ na azụ iji zere nsogbu nke mmegharị nke ikpo okwu n'ozuzu extruder kpatara, ọ dịkwa mfe ịgbanwe anwụ.
Nkà na ụzụ atụmatụ: Anyị na-eji usoro nchikota mandrel gburugburu, bụ nke na-agbanwe agbanwe nke ukwuu, na-enwe akụkụ dị iche iche nke ihe ruru 7 n'ígwé.The multi-layer co-extrusion isi adopts rheological imewe, onye ọ bụla oyi akwa nwere ezigbo okirikiri nkesa, oyi akwa Nchikota akụrụngwa na- evenly ekesa, na ike hazie plastic ngwaọrụ na a dịgasị iche iche.Ezi ọrụ nhicha onwe ya na obere extrusion olu.